မိုနာကိုနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်မွန်ဂိုရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို -
အကောင်းဆုံး မိုနာကိုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ Monaco တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများ Monaco ရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
မွန်ဂိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်မှုသည်မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မွန်ဂိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ မွန်ဂိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မွန်ဂိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယအနေဖြင့်နေထိုင်မှု၊ , မွန်ဂိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ မွန်ဂိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ မွန်ဂိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ မွန်ဂိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ မွန်ဂိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မွန်ဂိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မွန်ဂိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ မွန်ဂိုရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ မွန်ဂိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ မိုနာကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ , မွန်ဂိုရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ မွန်ကိုတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်မိုနာကိုရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မွန်ဂိုရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ၊ မွန်ဂိုရှိရွှေဗီဇာ၊ မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာ၊ မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ မိုနာကိုရှိဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ မွန်ကိုရှိဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်, မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာနေထိုင်ခြင်း နှင့်မွန်ဂိုရှိရွှေဗီဇာ၊ မွန်ဂိုရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ထပ်ဆောင်းအထောက်အပံ့ဖြင့်မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်မိုနာကိုတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 500,000
မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ မိုနာကို
မိုနာကို၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
3 -4လအတွင်း
မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ မိုနာကိုဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုမိုနာကိုနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့ရန်၊ မွန်ဂိုမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မိုနာကိုမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်မိုနာကိုမှ Golden Visa သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမိုနာကိုမှဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်ဖြစ်စေနေထိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုနာကိုမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီသည်။ မိုနာကိုသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ မိုနာကိုရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်မိုနာကိုအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ မိုနာကိုအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ, မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, မွန်ဂိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်မိုနာကိုများအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
မိုနာကိုမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်း။
မိုနာကိုနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
မိုနာကိုနိုင်ငံမှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
မိုနာကိုနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
မိုနာကိုနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
မိုနာကိုမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ၀ င်ငွေကောင်းကောင်းရသင့်သည်ဟူသောအမြင်နှင့်အတူမိုနာကိုတွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့သည်။ သူတို့သည်မွန်ဂိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့၏ Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Monaco ရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေထုတ်လုပ်သူအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ Monaco ရှိကောင်းသောနေရာများတွင်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်မိုနာကို Residency
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေမှမိုနာကိုနိုင်ငံမှနေထိုင်ခြင်းသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်မိုနာကိုသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ Monaco သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ မွန်ကိုမှသို့မဟုတ်မိုနာကိုသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကို Monaco အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Monaco ၏ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံရန် Diligence ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မိုနာကိုအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့် Monaco အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို scan ဖတ်မိလိမ့်မည်။
မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်မိုနာကိုနှင့်ရွှေဗီဇာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
Duration:3-4လအတွင်း
Monaco ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာအားအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်မိုနာကိုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Monaco ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် မိုနာကိုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်မိုနာကိုမှလက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် မိုနာကိုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ မိုနာကိုတွင်နည်းပညာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်မွန်ဂိုတွင်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် မိုနာကိုရှိတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် မိုနာကိုဘို့ မိုနာကိုရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် မိုနာကိုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မိုနာကိုရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် မိုနာကိုတွင်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်မိုနာကိုနိုင်ငံသားများအတွက်ထောက်ပံ့မှုကိုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် မိုနာကိုဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု မိုနာကိုဘို့ မိုနာကိုရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မိုနာကို မိုနာကိုမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် မိုနာကိုအတွက်ရှေ့ရပျ မိုနာကိုရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်မိုနာကိုနှင့် KYC အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်မိုနာကိုအာဏာပိုင်များမှငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
International Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်မိုနာကို၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်မိုနာကိုအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
သုံးစွဲသူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုမိုနာကိုနိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်မိုနာကိုတွင် Residency နှစ်နှစ်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်။
မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ရွက်များနှင့်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောမိုနာကိုအတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များမှအတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏ Residency Monaco မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည် Monaco အတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီး Monaco အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ သင်၏ Residency သည် Monaco သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပျက်ကွက်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residence မှ Monaco သို့သွားသော Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကို Monaco အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအားတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များစသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ မိုနာကိုအတွက်သုံးစွဲသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ Monaco အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ မိုနာကိုဘို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်မိုနာကိုတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူမိုနာကိုနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မိုနာကိုအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ မိုနာကိုတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သင်လိုအပ်မည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency အပြင် Monaco အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့သည် Monaco နှင့်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ မွန်နာကိုအခြားအကြံပေးများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမွန်ဂိုနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်စီစဉ်ထားသည်။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်စေရန်အတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်မွန်ဂိုရှိနိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကိုကျော်လွန်ပြီးမွန်ဂိုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ မိုနာကိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင် (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (Monaco တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုသက်သာသည်။ )
မိုနာကိုသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် မိုနာကိုရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် မွန်ဂိုရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, မိုနာကိုအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် မိုနာကိုအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် Monaco ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်စီစဉ်ရန်မိုနာကို မိုနာကိုတွင်ရှိသည့်စီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် မိုနာကိုမှာချက်ချင်းစတင်ဘို့။
မိုနာကိုရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ မိုနာကိုရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် မိုနာကိုတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
မိုနာကိုအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
မိုနာကိုအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ မိုနာကိုအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, မိုနာကိုအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
မိုနာကိုရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
မိုနာကိုတွင် setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
မိုနာကိုမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မိုနာကို.
မိုနာကိုတွင် Web ဒီဇိုင်း
မိုနာကိုတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မိုနာကိုတွင် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
မိုနာကိုတွင် App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မိုနာကိုမှာ software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Monaco အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Monaco အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ Monaco အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီသည်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ မိုနာကိုတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်မိုနာကိုနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည်နှင့်မိုနာကိုနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Monaco အတွက်ရှေ့နေသည်သင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်လုပ်ရပ်များအတွက် Monaco ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှ Residency မှလိုအပ်သည်။ သင်မိုနာကိုသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်မိုနာကိုသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မိုနာကိုအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်ရန်မိုနာကိုနယ်မြေတွင်အသုံးပြုသင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုမိုစလို်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေထိုင်ခြင်း
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်မိုနာကိုနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်မိုနာကိုနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုမိုနာကိုတွင်နေထိုင်ခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မိုနာကိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မိုနာကိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မိုနာကိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်ကိုမိုနာကိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့သည် မိုနာကိုမှာ။
မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်မှု | မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း မိုနာကိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် မိုနာကိုနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမိုနာကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုမိုနာကိုနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်မိုနာကိုနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်မိုနာကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမိုနာကိုနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မိုနာကိုနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနိုင်ငံသားခံယူထားသည့်မွန်ဂိုနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်မွန်ဂိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမိုနာကိုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများကမိုနာကိုနိုင်ငံ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ မိုနာကိုမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေရှေ့နေများ မိုနာကိုရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ မိုနာကိုအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | မိုနာကိုအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်မိုနာကိုနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းဖြင့်မိုနာကိုနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ မိုနာကိုနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုလျှောက်ထားသည်။ မွန်ဂိုအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မွန်နာရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ မွန်ဂိုရှိအကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့ရှေ့နေများနှင့်မိုနာကိုနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ မွန်ဂိုရှိအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မိုနာကိုရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
မိုနာကိုနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု မိုနာကိုရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ မိုနာကိုရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မိုနာကိုနိုင်ငံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မိုနာကိုနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်မိုနာကိုနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းဖြင့်မိုနာကိုနိုင်ငံသို့နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုရရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မိုနာကိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ မိုနာကိုရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်မိုနာကိုအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ မွန်နာရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မိုနာကိုရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်သည်။
မိုနာကိုအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ မိုနာကိုရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ မိုနာကိုအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
မွန်ဂိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
မိုနာကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်မိုနာကိုအတွက် Residency အတွက်တရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်, မွန်ဂိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်မိုနာကိုမှကိုယ်စားလှယ်များသည်မွန်ဂိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုထောက်ပံ့မှုပေးသည်။
Residency သည် Monaco အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်၊ Residency အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Monaco သို့အကြံဥာဏ်ပေးရသည်။ Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှမိုနာကိုသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှမိုနာကိုသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှမိုနာကိုသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှမိုနာကိုသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှ Monaco သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှ Monaco သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှ Monaco သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှ Monaco သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှ Monaco သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှ Monaco သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Residency နှင့် Residency ယူအေအီးမှ Monaco မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု မိုနာကိုဘို့
သင်၏နေထိုင်ခွင့်အတွက် Monaco သို့အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ
မိုနာကိုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှု, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး, ဝန်ကြီးဌာန
လူမှု ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန၊
link ကိုမှ မိုနာကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , မိုနာကိုမှာရှိတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်